BAOLINA KITRA :: Hiova endrika ny raiki-pohin’ny fifaninanana « Champions League » • AoRaha
BAOLINA KITRA Hiova endrika ny raiki-pohin’ny fifaninanana « Champions League »
Fanovàna fifaninanana. Tsy maintsy vitaina mialoha ny faran’ny volana febroary 2019 ny fiadiana ny ho tompon­daka isaky ny faritra rehetra eto Madagasikara ho an’ny taranja baolina kitra. Aorian’io kosa dia tsy maintsy tontosa mialoha ny faran’ny volana mey ny fifaninanam-pirenena rehetra, izany hoe ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madaga­sikara na ny Champions League sy ny fiadiana ny ho tompon’amboaran’i Mada­gasikara. Izay no fe-potoana napetraky ny Kaonfederasiona afrikanina an’ny taranja baolina kitra (CAF).
Tsy maintsy tanterahina ao anatin’ny telo volana noho izany ny Champions League. Mety hiova endrika ka hahena dingana roa ity fia­diana ny ho tompondakan’ny Nosy ity. Raha raisina ny endrika taloha dia tery dia tery io fe-potoana io, satria hatrizay dia nizara dingana telo ny fifaninanana. Ny dingana voalohany ahitana vondrona efatra no misy ekipa miisa efatra amby roa­polo, ny dingana faharoa ahitana vondrona roa misy ekipa miisa roa ambin’ny folo, ary ny dingana fahatelo farany dia ny “Poule des As”, ahitana ekipa miisa efatra sisa.
Klioba valo matanjaka
Tsy ho ampy ny telo volana hamitana ireo dingana telo ireo. Maro ireo klioba no ma­nenjika bitro roa, izany hoe sady mandray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondaka no miatrika ihany koa ny
fiadiana ny ho tompon’amboara. Izay no antony nahatonga ny fitantanana teknika nasionaly eo anivon’ ny Federasiona niketrika izao endrika vaovao izao.
Tsy hisy fiovana ny dingana voalohany, satria hotazomina hatrany ireo ekipa miisa efatra amby roapolo anatin’ny vondrona efatra. Ireo klioba roa voalohany isam-bondrona kosa no hiakatra amin’ny dingana faharoa farany, izany hoe klioba valo. Hihaona anatin’ny vondrona iray mitokana izy ireo, izany hoe hiatrika lalao fito ny ekipa iray. Ny telo na efatra amin’ ireo no horaisiny ao an-kianjany, dia ny telo na efatra tavela kosa no hatao amin’ny kianjan’ny ekipa mpifanandrina aminy. “Hanova sy hanatsara ny Champions League no tanjonay manomboka izao”, hoy ny avy ao amin’ny fitantanana teknika nasionaly.
AKON’NY FETY :: Niraisana ny hafaliana tamin’ny fankalazana ny krismasy